နေရခက်တယ်ရှင် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on နေရခက်တယ်ရှင်
လာ ထိုင်…..ထွန်းတင်….. ကျုပ်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်တယ်…။ နင့် အိမ်ကလူတွေ ဘယ်သွားကြလဲ….. အစ်မတို့ လင်မယားက ခြံထဲ သွားကြတယ်….၊ ဟိုမှာ သရက်တွေ ခူးပြီး အုပ်နေတယ်….. သူတို့ခြံက ရွာအစွန်မှာပါ…။ အတော်လေး ဝေးတယ်..။ အဖွားလေးရော…မိအေး….. အမေက သူ့ညီမနဲ့ ဒေးဒရဲ လိုက်သွားတာ နှစ်ရက် ရှိပြီ…. စကားသာပြောနေတယ်…။ မိအေး မျက်လုံးတွေက အရင်လို မဟုတ်ပဲ စူးရှပြောင်လက်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကျုပ်ကို ကြည့်နေတယ်..။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာက တစ်မျိုးပဲ…။ နင်ငါ့ကို ဘာပြောမလို့တုံး….. ပြော…..ပြောပါ့မယ်….. ချက်ချင်းပဲ မိအေးအသံက ငိုသံပါလာတယ်..။ ပြီးတော့ သူက ကျုပ်နဲ့ လူလုံးချင်း ထိအောင် တိုးကပ်ပြီး ထိုင်လိုက်တယ်..။
နင့်…..နင့်သူငယ်ချင်း ကျော်သိန်း လေ….ငါ့…ငါ့ကို ရက်စက်သွားတယ်….ဟင့်..ဟင့် ဟင့်………. ပြောလဲ ပြော ငိုလဲ ငို မိအေးဟာ ကျုပ်ကို ဖက်ပြီး ငိုတော့တာပဲ….။ ကျော်သိန်းနဲ့ သူနဲ့ ကြိုက်နေတာ ကျုပ်သိတယ်…။ အခု ကျော်သိန်းက အနောက်ပိုင်းက ဒေါ်ဘုမ သမီးကို ခိုးပြေးသွားပြီလေ…။ မိအေးကလဲ….ဟာ မငိုပါနဲ့…..သူကမှ ကိုယ့်ကို မခင်တာ…ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင် ပဲပေါ့…..နင်ကလဲ…. ဟင့်…ဟင့်..ငါအရမ်း ဝမ်းနည်းတယ်…… မိအေးက ကျုပ်ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းတိုးဖက်ပြီး ကျုပ်ရင်ဘတ်မှာ မျက်နှာအပ်ပြီး ငိုနေတယ်..။ အဲ…သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျုပ်ပေါင်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ကျုပ်လက်ကို လာကိုင်တယ်…။ ကိုင်တာက ကျုပ်လက်ဖမိုးကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး ကိုင်တာ…။ ဖြစ်ချင်တော့ ပေါင်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ကျုပ်လက်ဖျားက ကျုပ်ပေါင်ရင်းခွကြားပေါ်မှာ…ရောက်နေတာ…..။
သူက ကျုပ်လက်ဖမိုးကို အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဆုပ်လိုက်တော့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေက ကျုပ်လက်ရဲ့ အောက်ဖက်ကို ကွေးဝင်သွားပြီး ပုဆိုးထဲက ကျုပ်ရွှေပန်းကြီး ထိပ်ကို သွားထိတယ်…။ ဟင့်ဟင့်….ထွန်းတင်ရယ်….ငါ…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…..အဟင့်….ဟင့်….. သူ့ကိုယ်လုံးလေးက တသိမ့်သိမ့် ဖြစ်နေရာက သူ့လက်ချောင်းထိပ်တွေကလည်း ကျုပ်ရွှေပန်းကို ထလိုက် ထိုးလိုက်နဲ့ တို့ တို့နေသလို ဖြစ်လာတယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံး သနပ်ခါးနံ့ မွှေးနေတဲ့ မိအေးက ကျုပ်ကို သူ့ကိုယ်လုံးအိအိကြီးနဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်အောင် အတင်းဖက်ထားပြီး ကျုပ်ရွှေပန်းထိပ်ကိုလည်း သူ့လက်ချောင်းထိပ်တွေနဲ့ လာလာပြီး ထိထိနေတော့ ဘယ်ဗျာ….ကျုပ် ရွှေပန်းကြီးက ထောင်းခနဲ ထလာတော့တာပေါ့ ဗျာ….။
ကျုပ်ခြောက်နေတဲ့ လည်ချောင်းကို တံတွေးမျိုချပြီး စိုသွားအောင်လုပ်လိုက်ရတယ်..။ ပြီးမှ မော့ပြီး ပြောနေတဲ့ မိအေးရဲ့ မျက်နှာကို ငုံ့ပြီး စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်..။ ကဲ ကဲ…ဒါလောက်ဖြစ်နေရင် …ငါ့ဟာလဲပြမယ်….နင်ကလည်း နင့်ဟာကို ပြ…ဘယ့်နှယ်လဲ…. အာ……နင်ကလဲ…… ကျုပ်တို့က ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ် ကလေးတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး…။ သိသိကြီးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါ…။ နင့်ဘက်ကျတော့ နင်ကသိပ်သိတာပဲ….ဒါဆို ငါလဲ မပြတော့ဘူး….. ကဲ…..လာဟာ…အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ….မကောင်းဘူး…အထဲသွားမယ်…. မိအေးက ခေါက်ကာလိုက်ကာနဲ့ ကာထားတဲ့ အခန်းထဲကို ထပြီးဝင်သွားတော့ ကျုပ်လဲ နောက်က လိုက်ခဲ့ပါတယ်…။ သူဝင်သွားတဲ့ အခန်းက သူ့အစ်မလင်မယား အိပ်တဲ့ အခန်းပါ…။ အထဲမှာ မွေ့ယာထူထူကြီးနဲ့ အိပ်ယာကြီးက အခန့်သား…..။
တစ်ခါ မိအေးက ထိပ်ဖျားထိရှိနေတဲ့ ကျုပ်လီးရဲ့ အရည်ခွံကို ဆွဲချလိုက်တာ ကျုပ်ဒစ်ကြီး ပေါ်လာတော့တာပဲ…။ နင်……နင်နဲ့ ရတဲ့ မိန်းမက….ကံကောင်းတာပဲ…. တိုးတိုးလေး ညည်းသလိုပြောလိုက်တဲ့ မိအေးရဲ့ အသံလေးဟာ တုန်နေပါတယ်…။ အသံ သာမဟုတ်ပဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာလည်း တုန်ရင်နေပါတယ်…။ ကဲ…..နင် ဟိုဖက်လှည့်နေ….ငါက လှည့်ကြည့်ဆိုမှ လှည့်နော်…… ကျုပ်လည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း နောက်ကို လှည့်နေလိုက်ပါတယ်…။ ခဏနေတဲ့အခါမှာတော့ …… ရပြီ…..ဒီဖက်လှည့်တော့…… ဆိုတဲ့ အသံတိုးတိုးလေးကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျုပ်လည်း နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်…။ ဟာဗျာ….ကိုယ်လုံးတီးနဲ့လေ….ခေါင်းလေးငုံ့လို့…ပေါင်ကြားမှာ အမွှေးမဲမဲလေးတွေကြောင့်။
ကျုပ်လဲ အသိစိတ်ပျောက်သွားပြီး သူ့နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စို့ပစ်လိုက်တယ်…။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံး အသက်ရှူသံတွေ တရှူးရှူးနဲ့ ပေါ့ဗျာ….။ မိအေးက နို့စို့ခံရင်းကနေ ကျုပ်ကို အောက်ကနေ ခွထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး ကားပေးလိုက်တယ်…။ ကျုပ်လည်း မြင်ဖူးကြားဖူးထားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ….၊ မှောက်ရက်ကနေ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားကို ထိုးတော့တာပေါ့…။ ကျုပ်မျက်နှာကတော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ နို့စို့မပျက်ဖူးပေါ့…။ လက်တွေ့မလုပ်ဖူးတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ လီးက တွင်းဝင်မဖြောင့်ပဲ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ မိအေးရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ ပေါင်ခြံတွေနဲ့ အကွဲကြောင်းထိပ်က ပုလဲပုတီးစေ့လောက်ရှိတဲ့ အစိကိုပါ ထိုးမိနေတာပေါ့…။
မိအေး တရှူးရှူး တရှဲရှဲ နဲ့ လူးလူးလွန့်လွန့် ဖြစ်နေပါတယ်…။ ပြီးတော့ ….. နဲနဲ….ကြွလိုက် အုံး…… မောသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တော့ ကျုပ်က ကိုယ်လုံးကို ကြွလိုက်တော့ လီးက သူ့အဖုတ်နဲ့ ကွာသွားတယ်…။ အဲဒီမှာတင် သူ့လက်နှစ်ဖက်ဟာ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ရောက်လာပြီး တစ်ဖက်က ကျုပ်လီးကို ကိုင်တယ်…၊ တစ်ဖက်က သူ့စောက်ပတ်ကို ဖြဲပေးတယ်….။ ကျုပ် ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အဖုတ်ထဲက အသားလေးတွေက ရဲနေတာများ…ဗျာ…။ အဲသလို ဖြဲပြီးတာနဲ့ တခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ထားတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို သူ့စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့ပေးလိုက်တယ်..။ သွင်း….သွင်းတော့….. ဗြစ်….အား…..အမလေး……အား… သွင်းတော့ဆိုတာနဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ ကျုပ်ဟာ တအားဆောင့်ထိုးချလိုက်တာ လီးက တဆုံးဝင်သွားတယ်…။
မိအေးမှာတော့ အလန့်တကြားနဲ့ အော်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါနေတယ်..။ ကျုပ်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ လီးတဆုံးသွင်းထားပြီး ငြိမ်နေမိတယ်…။ မိအေးက သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျုပ်လက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ် ဆွဲချတယ်..။ ကျုပ်လဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားပြီး မိအေးရင်ဘတ်ကို မျက်နှာအပ်မိတာနဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ပြန်စို့ပစ်လိုက်တယ်…။ ထိုခဏအတွင်းမှာပဲ မိအေးရဲ့ ဆတ်ဆတ်ခါနေတဲ့ ကိုယ်လုံးဟာ ငြိမ်ကျသွားပြီး သူ့လည်ချောင်းထဲက တအင်းအင်းနဲ့ ငြီးသံ ထွက်နေတယ်…။ ပြီးတော့ စောက်ပတ်ထဲကို တဆုံးဝင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို သူ့အဖုတ်အတွင်းသားတွေက လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ဖိဖိနေတယ်…။ ကျုပ်လည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘူး…။ လီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်သွင်းကာ လိုးတော့တာပါပဲ…။ ဗြစ်……ပလွတ်……အား….. မိအေးဟာ မျက်လုံးမပွင့်တော့ပါဘူး….။
တအင်းအင်းနဲ့ ငြီးပြီး ကျုပ်ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သူ့ကိုယ်လုံးလေးဟာ တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတော့တာပေါ့….။ ကျုပ်လဲ မှောက်ရက်ကနေ ဆောင့်ရတာ အားမရတော့ဘူး…။ ဒါနဲ့ ကျုပ်ကိုယ်ကို မိအေးအပေါ်ကနေ ခွာပြီး ထလိုက်ရာက လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မိအေး နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲ ဆွဲပြီး စိတ်ရှိတိုင်း ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်ပါတယ်…။ လိုးရင်းကနေ မိအေး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို ငုံ့ငုံ့ကြည့်မိတယ်…။ သူ့အထဲက အရည်တွေဟာ ရွှဲခနဲ ရွှဲခနဲ ထွက်ထွက်ကျလာလိုက်တာ….မနည်းပါဘူးဗျာ….။ အောက်ကမွေ့ယာ အိပ်ယာခင်းတောင် ရွှဲနေပြီ…။ နောက်ပြီး မိအေးကလည်း လည်ပင်းကြောတွေ ထောင်သွားအောင် တအီးအီးနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး သူ့ခေါင်းလေး ခါရမ်းသွားတာလည်း မကြာခဏပါဘဲ…..။
နောက် အတွေ့အကြုံ ရလာမှ စဉ်းစားမိတာ မိအေး ခဏခဏ ပြီးနေတာကိုး…အီး… ကျုပ်တအားဆောင့်လိုးနေတဲ့ သူ့စောက်ပတ်တော့ မသိဘူး….၊ ကျုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိအေးနို့နှစ်လုံးကတော့ ရဲရဲနီလာတော့တာပဲ….ဗျ….။ စပြီးလီးဝင်တဲ့ အ ချိန်ကနေ တွက်ရင် ကွမ်းတစ်ယာညက်လောက် ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျုပ်လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မပြောတတ်ဘူး…။ ဆောင့်အားတွေ တဖြေးဖြေး လျော့လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကတုန်ကရင် ဖြစ်လာရာက ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ကျုပ်ခါးက ကော့ကော့သွားပြီး လီးထိပ်က အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်ပါလေရော…..။ ကောင်းလိုက်တာ…ကျုပ်ဖြင့် မိအေးကို ကုန်းဖက်ပြီး အားရပါးရ နမ်းပစ်လိုက်တော့တယ်….။ကျုပ်နဲ့ မိအေးဟာ အစရှိ အနောင်နောင်ဆိုသလို နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြား လူလစ်ရင် လစ်သလို လိုးခဲ့ကြတာပါပဲ…။
မိန်းမသားတွေက စိတ်နုတယ်…လေ..။ အစ်မ ခံစားနေရတော့ သူလည်း ခံစားချင်လာမှာပေါ့…။ ဒါကြောင့် ရီးစားထားတော့လဲ ကျော်သိန်းက သူထန်တာကိုကြည့်ပြီး ကြောက်ပြေးတော့ ကျုပ်ကို မိအေးက သူလိုတာ ဖြည့်ဆီးခိုင်းတယ်…။ ကြည့်ပါလား….သူ့အစ်မခံတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာကို မိအေးက တက်ခံပစ်တာ…။ ကျုပ်ဆိုတာက အပြင်လူဗျ…။ လူလစ်မှ တွေ့ရတာ…။ လူလစ်အုံးတော့ ကျုပ်လဲ အား သူလဲ အားအုံးမှ အလုပ်ဖြစ်မှာ..။ ဒီတော့ တစ်အိမ်ထဲ အတူနေ နီးစပ်တဲ့ သူ့ခဲအိုနဲ့ ဖြစ်တော့တာပေါ့…။ ကျုပ်သာ ဝတ္ထု ရေးတတ်ရင် မိအေးရယ်….။ မိအေးအစ်မနဲ့ ခဲအိုရယ် ကျုပ်ရယ်ကို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက် ရေးလိုက်ချင်ပါတယ်….။ ထွန်းတင်ရေ…..ထွန်းတင်…..ထွန်းတင် ရှိလား….. ရှိတယ်….လာပြီ…… ခြံဝက ခေါ်သံကြောင့် ကျုပ်ဟာ ထမင်းစားနေရာက လက်ဆေးပြီး ကမန်းကတန်း လက်သုတ်ကာ အိမ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းခဲ့ပါတယ်…။
အော်…..ဘယ်သူများတုံးလို့…ဒွေးလေးပု ပါလား…. ဟုတ်တယ်….ထွန်းတင်ရေ…..နုထွေး ကွင်းထဲသွားလို့ ထမင်းပို့မဲ့လူ မရှိလို့…အစကတော့ ငါသွားပို့မလို့ပဲ…အခု မတင်အေး ဗိုက်နာနေလို့ ငါ မသွားနိုင်တော့ဘူး…၊ မယ်အေးတို့အိမ် သွားရအုံးမှာ….နင်သွားပို့ပေးပါလား….. ဟုတ်ကဲ့…ဒွေးလေးပု…ပေး ထမင်းချိုင့်….ဒါနဲ့ နုထွေးက ကွင်းထဲကို တစ်ယောက်ထဲ ဘာသွားလုပ်တာလဲ….. အိမ်မှာ သူ့အစ်ကို မရှိဘူး…၊ မြို့တက်သွားတယ်..လယ်ထဲမှာ သူရင်းငှါးတွေ နောက်ချေးချတာကို အမေတို့ သားအမိ သွားကြည့်ပေးပါဆိုလို့…ဟေ့….. ဒွေးလေးပု မကျေမချမ်း ပြောသည်…..။ ကဲ….ကျုပ် သွားတော့မယ်…နေတောင် အတော်မြင့်နေပြီ…နုထွေး ဆာနေရော့မယ်… အေး…..သွား သွား…နင်အလုပ်အားရင် ညနေ နုထွေး ပြန်မှ ပြန်လာခဲ့….. ဟုတ်ကဲ့ ဒွေးလေးပု…..။
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ် ကွင်းထဲကို ထွက်လာခဲ့တယ်…။ တဲရောက်တော့ တဲပေါ်ကနေ ခြေတွဲလောင်းချပြီး ထိုင်နေတဲ့ နုထွေးက ပြေးထွက်လာတယ်…။ ပြီးတော့ ကျုပ်လက်ထဲက ထမင်းချိုင့်ကို ဆွဲယူတယ်…။ နုထွေးက ပါးကွက်နဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့ လှနေတယ်…။ အမေ ကဘာလို့ မလာတာလဲ.. မယ်အေး ဗိုက်နာလို့တဲ့..ဟေ့… ဟိဟိ..ကိုထွန်းတင် ကြားထဲက အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့…ဟိ…. ကဲပါ….စားမှာ စားစမ်းပါ….ဟာ…. ကျုပ်လဲ တဲဝကသောက်ရေအိုးမှာ ရေတစ်ခွက်ခပ်သောက်ပြီး တဲပေါ်တက်ပြီး တုံးလုံးလှဲနေလိုက်တယ်..။ ကျုပ်ရဲ့ ခြေထောက်နား ဘေးဖက်မှာ နုထွေးကတော့ ထမင်းချိုင့်တွေ ဖြုတ်ပြီး စားနေလေရဲ့..။ ထမင်းစားနေတဲ့ နုထွေးကို ကြည့်ပြီး ကျုပ်စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်လာတယ်…။ ထိုင်ချထားတဲ့ နုထွေးရဲ့ တင်းပါးအိအိကြီးတွေက ကားကားကြီး..။
ဘေးစောင်းမြင်နေရတဲ့ သူ့ရင်သားတွေကလည်း ခပ်ထွားထွား ..။ ကျုပ်က မိန်းမလုပ်ဖူးပြီး ပြတ်နေတာ တစ်လလောက် ရှိသွားပြီ…။ မိအေး သူ့ခဲအိုနဲ့ လိုက်ပြေးသွားကထဲက ပြတ်နေတာ…။ ဒီတော့ …ကျုပ်သွေးသားတွေက လှလှ တောင့်တောင့် ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ သွေးဆာလာတာပေါ့..။ နုထွေးက ကျုပ်ထက် နည်းနည်း ငယ်တယ်…။ တောသူဆိုတော့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်တဲ့ အခါ လုပ်ရပြီး ၊ အစားအသောက်ကလည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အလျှံအပယ်ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ထွားကြိုင်းတာပေါ့…။ နုထွေးကို ကြည့်ရင်း ကျုပ်လီးကြီးက ပုဆိုးထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတယ်..။ ကျုပ်ကြည့်နေတာကို တွေ့နေရတဲ့ နုထွေးက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်ပြီး ပြုံးပြုံး ပြနေတယ်…ဗျ…။ ဆိတ်ကွယ်ရာ ရောက်နေကြတာကိုး…။ အဲ…ပြောဖို့တစ်ခုကျန်သေးတယ်..။
ကျုပ်တဲထဲ အဝင်မှာ လယ်ထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူရင်းငှါးတွေက တစ်ခေါ်လောက်မှာရှိတဲ့ လယ်ကွက်တွေထဲမှာ နောက်ချေးတွေ ချနေကြတယ်..။ ကျုပ်တို့နဲ့ တော်တော်လှမ်းပါတယ်..။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာ ဖြစ်နေတာပေါ့…။ ဒီဆိတ်ကွယ်ရာ အခြေအနေကြောင့်လည်း ကျုပ်ရဲ့ သတ္တိတွေဟာ ပိုပြီး ရှိလာတာပေါ့..။ နုထွေးက ထမင်းစားပြီးလို့ ချိုင့်တွေ ပြန်ဆင့်ပြီးတာနဲ့ ကျုပ်လှဲနေတဲ့ အနားလာပြီး ထိုင်တယ်..။ အစ်ကိုထွန်းတင် ပြန်လို့ရပြီ…အားနာလိုက်တာ..အမေတို့များ အားလားမအားလား မသိဘူး….. ငါက အားနေတာပါဟ…ဒွေးလေးပုက ညနေနင်ပြန်မှ အတူပြန်လာဖို့ ငါ့ကို မှာလိုက်တယ်.. ဟာ…အမေတို့ကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ…..တစ်ဖက်သား အားနာစရာ..ဒီမှာ ဘာကြောက်စရာ ရှိလို့လဲ….။
နုထွေးက ဖျင်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ အပြင် အထဲကပါ ဘော်လီအင်္ကျီရှိတော့ ပိုပြီး အားထည့်ညှစ်တယ်…။ သူ့တင်သားကြီးတွေကို တအားတအား လိုက်ညှစ်ပစ်တယ်…။ လွှတ်…လွှတ်ပါအစ်ကိုရယ်…နုထွေး တောင်းပန်ပါတယ်…. မရပါဘူး….ကျုပ်လီးက အထဲမှာ အတော်မာတောင်နေပြီ…။ ကျုပ်က နမ်းချင်တိုင်း နမ်းပြီး ကိုင်ချင်တိုင်း ကိုင်နေတော့တာ….။ ကျွတ်…ခက်တာပဲ…. ခဏကြာတော့ ကျုပ်က သူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်..။ နုထွေးမျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲနေပြီး ပါးနှစ်ဖက်က ပါးကွက်လေးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး..။ မောနေတယ်…။ ဟွန်း…..တော်တော်ဆိုး…..ဒီမှာ ရင်ထဲကို ဖိုးသိုးဖတ်သပ်ကြီး ..နေရခက်လိုက်တာ…. ကျုပ်လဲ အကြံရသွားတာနဲ့… ငါလည်း…နင့်လိုပါပဲ ဟ….ဒီမှာ ကြည့်ပါအုံး….. ပြောလည်း ပြော ကျုပ်က ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ချွတ်ချလိုက်တယ်..။
အို…… တောင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကိုလဲ မြင်ရော နုထွေးမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ ကြည့်ပြီး ကြက်သေ သေသွားတယ်…။ ကျုပ်လီးက မိအေးကို သုံးလလောက် လိုးခဲ့လို့ အပေါ်အရည်ခွံက ထိပ်မှာ မရှိတော့ပဲ နှီးတစ်ပြားလောက် လန်နေပြီ…။ နုထွေး ကြက်သေ သေသွားတဲ့ အခိုက်မှာပဲ ကျုပ်က သူ့ကို ပြန်ဖက်ပြီး ကျုပ်ကိုယ်နဲ့ ဖိပြီး လှဲချတယ်…။ အိုအို….မလုပ်နဲ့…..အဟင့်…ဟင့်..ဟင့်…… နုထွေး ငိုပါပြီ…။ ရုန်းတော့ မရုန်းတော့ဘူးဗျ..။ နုထွေး ပက်လက်လန်သွားတယ်ဆို ကျုပ်က သူ့ပေါ်တက်ခွတော့တာဘဲ…။ ကျုပ်လီးကြီးကတော့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ ဖြစ်နေတယ်….။ ခွမိတာနဲ့ ဗိုက်ကြွပြီး စောစောက ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ လျော့ရဲရဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်..။ နုထွေး မျက်လုံးမှိတ်ချလိုက်တယ်..။ ထမီကို အကုန်ချွတ်မနေတော့ပါဘူး…။
ဒူးဆစ်လောက်အထိပဲ ချွတ်တယ်…။ ကျုပ်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အမွှေးနုနုလေးတွေနဲ့ စောက်ပတ်ကြီးက ဝင်းအိနေတာဘဲ…။ မိအေးစောက်ပတ်ထက် ပိုပြီးလှတယ်…။ ကျုပ်က လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်..။ အဟင့်….အဟင့်…….. နုထွေး တစ်တွန့်တွန့် ဖြစ်သွားရာက စေ့ထားတဲ့ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးက ဟသွားတယ်..။ ဒီမှာတင် ကျုပ်က တောင်နေတဲ့ လီးကို စောက်ပတ်ဝမှန်းပြီး တေ့ထောက်လိုက်တယ်…။ နုထွေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားတယ်…။ တေ့ပြီးတာနဲ့ မိအေးကို စလိုးတုံးကလို အတင်းဆောင့်မထည့်ပဲ လီးကို ဆတ်ခနဲ ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်..။ အမေ့….. နုထွေး ခါးကော့တက်သွားတယ်…။ သူ့ဟာထဲမှာလဲ အရည်တွေ ရွှဲနေပါလား….။ လီးက ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဝင်သွားတယ်..။
ကျုပ်က ဆက်ပြီး ဖြေးဖြေးပဲ ဖိဖိသွင်းတယ်…။ ဗြစ်….အမေ့….. “နုထွေးကတော့ ခါးလေးကော့လိုက် ရင်လေးကော့လိုက်နဲ့ ပေါ့…။ အသားလေးတွေလည်း တဆတ်ဆတ် တုန်နေတယ်…။ လီးတစ်ဝက်နီးပါးလောက် ဝင်သွားပြီးတော့ အထဲမှာ ဘာခံနေတယ် မသိဘူး ၊ လီးက ဆက်မဝင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်…။ ဒါနဲ့ ကျုပ်က လီးကို ခပ်ဖြေးဖြေးဆွဲထုတ်ပြီး အားနဲနဲ ထည့်ပြီး ဆောင့်ချလိုက်တယ်…။ ဗြစ်…ဖွတ်……ဖေါက်…..အမေရေ……အားအား…..အ……….. အားထည့်တာ နဲနဲများသွားပြီး လီးက တဆုံးဝင်သွားတယ်..။ အပျိုလေးမို့ အတော်နာသွားပုံရတဲ့ နုထွေးက တော့ မျက်နှာမဲ့ပြီး မျက်ရည်တွေ သွင်သွင်စီးကျပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေတယ်…။ စောက်ပတ်ထဲ လီးတဆုံး ဝင်သွားပြီဆိုတော့ ကျုပ်လဲ ဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲ…၊ လီးကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး လိုးတော့တာပေါ့..။
အစမို့ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ…ပေါ့…။ ဗြစ်….ဒုတ်…….အ……ဟင့်…… တခဏအတွင်းမှာပဲ..သူ့အထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲနစ်လာပြီး..နုထွေးလဲ ငိုတာရပ်သွားတယ်…။ ပြီးတော့ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျုပ်လက်မောင်း တစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး တအားညှစ်ကိုင်ထားတယ်…။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ပိုပြီး ကားပေးလာတယ်..။ နုထွေးက သူ့ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားက စင်းကျနေတဲ့ သူ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဖြတ်ခနဲ ဖြတ်ခနဲ ဖွင့်ဖွင့်ပြီး ကျုပ်ကို ကြည့်တယ်…။ နုထွေး ခံနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျုပ်လဲ စိတ်ကို လွှတ်ပေးပြီး ဆောင့်လိုးတော့တယ်…။ ဗြစ်….ဒုတ်…..ဖွတ်…ဟင့်……အင့်… ငယ်သာငယ်တယ်….၊ တော်တော်သန်တဲ့ ကောင်မလေးဗျ…။ လိုးနေတဲ့ ကျုပ်လီးကိုများ သူ့စောက်ပတ်နဲ့ ဆွဲဆွဲညှစ်လိုက်တာများ လီးကို တန့်ခနဲ တန့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရတာပဲ…။
ဒီလိုညှစ်တာက ကျုပ်ကို ကောင်းစေချင်လို့ ညှစ်ပေးတာလည်း ပါတယ်..။ ကာမအရသာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုလည်း ပါတယ်ပေါ့…။ ပလွတ်…ဗြစ်…ဇွတ်……ဖွတ်…..ဒုတ်……အင့်…ဟင့်…ဟင့်….. ကောင်းလား..နုထွေး…. အင်း…..ဟင့်အင်း…သိဘူး….. အသံလေးက ခရာတာတာလေး…ကျုပ်လဲ အ တော်ကောင်းလာတာကြောင့် ခပ်သွက်သွက်ကြီးကို ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးလိုးရာက သုတ်လွှတ်လိုက်တော့တယ်…။ သူလည်း ပြိုင်တူ ပြီးတယ်နဲ့ တူတယ်…။ ကျုပ်လည်း သုတ်လွှတ်လိုက်ရော… အမလေး….အစ်ကို…အ………အိ..အမေ့… ဆိုပြီး ကော့ကော့တက်သွားရာက တွန့်တွန့်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ခါဆင်းသွားတော့တာပါဘဲ….ဗျာ……ပြီးပါပြီ….။